Ikhadi leRFID, Usuku olumyoli, Ikhadi le-CPU, Inlay yeRFID, I-RFID Tag Tag, Ukuchonga, UkuGada abaSebenzi abaSebenzayo, I-AIDC, Itikiti le-E, Izitikha, Ilebheli yeRFID, Ithegi yentsimbi, Ibhanti yesandla ye-NFC, Isongo seRFID, Isitshixo, Umfundi weLF / HF / UHF, Ulawulo lokufikelela, Ukuzimasa ixesha, Isixhobo sokuchonga iminwe yeminwe
Singumvelisi oqeqeshiweyo weemveliso zeRFID eShenzhen, iimveliso zethu zibandakanya onke amakhadi e-RFID, iilebheli, inlay, izitikha, izixhobo zekhompyutha, kubandakanya ulawulo lofikelelo funda kwaye ubhale uphuhliso lwemveliso yezixhobo, uphuhliso lwesoftware kunye nesisombululo seprojekthi yesicelo seRFID.
Wonke umthengi wahlukile, yonke imeko yahlukile. Ukuziqhelanisa nokujikela kwi-SeabreezeRFID ngezizathu ezininzi. Kodwa, kwiimeko ezininzi, isasaza kwigama elinye: Ithemba. Ukuthembela kwiimveliso zethu kunye nezisombululo, Thembela kwiziphumo zethu. Ukukhetha i-SeabreezeRFID njengelungu leqela lakho kunye negalelo kwimpumelelo yeshishini lakho yivoti ebalulekileyo yokuzithemba. Singavuya ukusebenzisa iimveliso zethu, izisombululo kunye neziphumo egameni lakho kwaye uqale ukufumana ukuthembela kwakho.
INKONZO YETHU EBALULEKILEYO
I-SeabreezeRFID ibonelela ngoncedo olunamava nolubanzi kuluhlu olubanzi lweemfuno zeshishini zeRFID kunye neIoT, kwaye hayi kuphela iimveliso zokuqala zeRFID kunye nesisombululo sesicelo seprojekthi, ngakumbi iimveliso ezinexabiso eliphezulu ukukhuthaza ishishini lakho ukuba likhule ngokukhawuleza kwaye lifikelele kwiinjongo zakho.
Siyaxhasa: Obusemagqabini ubunjani, Ixabiso lexabiso, inkonzo egqibeleleyo, Umgaqo wokuhanjiswa kwexesha, ukunceda abathengisi kunye nabasebenzisi bokugqibela, ukungena kwimarike, phucula iimveliso, Ngaba i-OEM kunye ne-ODM ngokupheleleyo, ukuphelisa amaxhala akho. Jonga iinkonzo zobungcali zeSeabreezeRFID, kwaye masithethe.
Sizimisele ukuvelisa iRFID & Iimveliso ze-IoT zeshishini lakho!
SeabreezeRFID LTD banemigca epheleleyo yemveliso yokuchongwa kweRadio Frequency, imveliso yethu iqulethe ezahlukeneyo chips ukusuka frequency ephantsi, Ukuhamba rhoqo kwaye Ukuhamba rhoqo. Unokubonelela ngeenkonzo ezenzelwe ukuhlangabezana nezimvo zakho ezizodwa kunye neemfuno.
Ikhadi leCPU ye-J3H081 Chip Dual Interface, Ikhadi leCPU ye-J3H081 Chip Dual Interface
FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card
FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card
I-NTAG 424 I-DNA yokuNqanda izinto ezingezizo ezobuchwephesha zokuncamathela, I-NTAG 424 I-TT yokuThintela ubungqina belebheli yokuBhala ngokufihlakeleyo
FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card
Elungiselelwe i-Anti-metal Smart Card, Elungiselelweyo Anti-metal PVC Material RFID Card, Elungiselelweyo Anti-metal Plastic IC Card
Ikhadi lePolycarbonate Material, Izinto zePC Ubushushu obuPhezulu beKhadi leRFID elikhuselayo
FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, FM1208-9 Chip Anti-ikopi Access Card, Laser Holographic Portrait Anti-yomgunyathi Card
1. Laser Holographic Portrait Anti-yomgunyathi Card
Umthengi ubonelela nge-HF / Uyilo lwe-antenna lwe-UHF, ifomathi yefayile ICANDELO LE-CAD (.dwg), sicaphula 24 iiyure, Iindleko ezicatshuliweyo zibandakanya iindleko zokwenza ipleyiti kunye nesicatshulwa semveliso, iqinisekisa iinkcukacha zobugcisa, emva kokusayina isivumelwano, Siza kubonelela ngobume be-eriyali ngaphakathi 24 iiyure – Ukuqinisekiswa kwabathengi – Umthengi Qinisekisa ubeko lweplate kunye nentlawulo yeplate yokuhlawula – sihlela isicwangciso imveliso – Ukwenza ipleyiti kunye nemveliso yesampula – Laser Holographic Portrait Anti-yomgunyathi Card.
Ukuba umthengi akanalo uyilo lwe-eriyali, emva koko kuya kufuneka ubonelele ngobungakanani beempawu ze-eriyali, iimodeli ze-chip ezibophekileyo (umzekelo: Ngaphezulu, NDIKHOWUDELA I-SLI-S, Umphambukeli H3, Impinj Monza 5), imodeli yomatshini wakho wokubopha. Olu lwazi lungentla silufumana ngaphakathi 24 iiyure ukubonelela ngoyilo lwe-eriyali kunye nemirhumo yokwenza iipleyiti namaxabiso emveliso. I-Antenna yoyilo ixesha lokuYila: HF eriyali 7 Usuku lweShishini, UHF eriyali 24 Usuku lweShishini.
Laser Holographic Portrait Anti-yomgunyathi Card.
2. I-HF / UHF yesilivere ye-Ink Ink ye-tag ye-Inlay, Isilivere yeNki yokuPrinta i-Antlay Inlay
I-inki yesilivere ye-ink ye-conductive yokushicilela i-radio frequency identification tags ye-elektroniki yokuqhuba kombane kunye nokubambelela, kwaye inezibonelelo zokuguquguquka okuhle, ukusebenza okuzinzile, kunye nokumelana ephantsi igcwala.
Ukusetyenziswa kwe-inki eqhubayo ukuprinta i-eriyali endaweni yendlela yesiko lokudibanisa ukwenza i-eriyali kwithegi ye-elektroniki kunciphisa iindleko zokuvelisa kwithegi ye-elektroniki yeRFID.
I-eki yeSilikh I-eriyali eshicilelweyo iithegi zekhompyuter zisetyenziselwa izinto ezingezizo, ukhuseleko, Ukuchasana neemveliso, iithegi ziyatshatyalaliswa xa sele ikrazukile, ezilungele ukusetyenziswa kunye nolawulo lweemveliso ezichaseneyo nomgunyathi.
Rhoqo: HF 13.56MHz / UHF 840 ~ 960MHz
Ubungakanani be-eriyali: isiko
Ithegi esezantsi: PET / Iphepha
Izinto ze-Antenna: Cola isilivere inki eqhuba
» Laser Holographic Portrait Anti-yomgunyathi Card ?
» Laser Holographic Portrait Anti-yomgunyathi Card
» I-ECB isungula iITIPS, Ityholwa ngokuba yiRipple INkonzo yokuHlawula kwangoko